दुई चुनावमा ५ पार्टीको मत हिसाब–किताब, कसको घट्यो कसको बढ्यो ? | Hulaki Online
दुई चुनावमा ५ पार्टीको मत हिसाब–किताब, कसको घट्यो कसको बढ्यो ?
हालै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख ५ पार्टी एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा नेपाल र संघीय समाजबादी फोरम नेपाललमध्ये गत स्थानीय चुनावमा भन्दा माओवादी केन्द्रको तीन लाख ४ हजार ३७ भोट कम आएको छ ।
एमाले, कांग्रेस राजपा र फोरमले भने स्थानीय निर्वाचनमा ल्याएको मत भन्दा बढि नै ल्याएका छन् ।
गत बैशाख, असार र असोजमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सवैभन्दा ठुलो र धेरै स्थान जितेको एमालेले जम्मा ३१ लाख २८ हजार ३६३ मत ल्याएकोमा अहिलेको निर्वाचनमा ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत पाएको छ । उसले अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा ४५ हजार ५८३ मत बढी पाएको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा ३१ लाख १५ हजार ६६४ मत ल्याएकोमा यो निर्वाचनमा ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको छ । अघिल्लो र यो निर्वाचनमा कांग्रेसले १२ हजार ६ सय २५ मत बढि पाएको छ ।
कांग्रेस र एमालेको तुलनामा माओवादी केन्द्रको भने स्थानीय तहमा पाएको मत भन्दा यो निर्वाचनमा २ लाख १९ हजार १६ मत कम आएको छ । उसले स्थानीय निर्वाचनमा १६ लाख ७ हजार ७५८ मत पाएकोमा यो निर्वाचनमा १३ लाख ३ हजार ७२१ मत मात्र पाएको छ ।
त्यस्तै राजपा नेपालले पनि स्थानीय चुनावमा भन्दा यो चुनावमा २ लाख बढि मत पाएको छ । राजपाले स्थानीय चुनावमा २ लाख ७० हजार ३३८ मत पाएकोमा यो निर्वाचनमा ४ लाख ७२ हजार २५४ मत पाएको छ । राजपाले स्थानीयमा भन्दा २ लाख १हजार ९१६ मत बढि छ ।
अर्को दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा बढि भोट ल्याएको छ । फोरमले स्थानीय निर्वाचनमा ४ लाख
२४ हजार ५१० भोट पाएकोमा यो निर्वाचनमा ४ लाख ७० हजार २०१ भोट पाएको छ । स्थानीय भन्दा फोरमले अहिले ४५ हजार ६९१ भोट बढि ल्याएको छ ।
–स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल मतदाता–१ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२
–प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कुल मतदाता– १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१
–थपिएका मतदता– १३ लाख ७३ हजार २ सय ४९ ।
स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुले ल्याएको मत
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रमख दलहरुले पाएको मत
स्थानीय निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचनमा कुल १३ लाख ७३ हजार २९४ मतदाता थपिएका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड चार लाख ३१ हजार ४ सय ६० भोट खसेकोमा कुल ९१ लाख ६१ हजार ७ सय ६३ मत सदर भएका थिए ।
अहिलेको निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदाता रहेकोमा एक करोड ५ लाख मत खसेकाे थियाे ।